Ifulethi Waldblick - Eschhofen - I-Airbnb
Ifulethi Waldblick - Eschhofen
Limburg an der Lahn, Hessen, i-Germany
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Werner
Ifulethi elinamagumbi angu-4:
Iklonyeliswe ngezinkanyezi ezi-4 (kubantu abangu-6) yi-German Tourism Association.
Ifulethi elisha elinethezekile elingabhemi labantu abangu-2 - 8 (ukubhema kuvunyelwe kuvulandi), elinamagumbi okulala angu-3, amagumbi okugeza angu-2 anendlu yangasese neshawa, igumbi lokuhlala eli-1 elibanzi elinekhishi elifakiwe, indawo yokudlela kanye nombhede, indawo evulekile, embozwe kancane. kuvulandi siqukethe 3 amakamelo walkable.
Ilungele kakhulu amaqembu amabhayisikili amancane, amaqembu ezithuthuthu, abaqwali, abahamba ngezikebhe nabatshuzi.
Ifulethi lilinganiselwa ku-96 m² futhi linamakamelo okulala amathathu, ngalinye lilinganiselwa ku-16 m². Ngamunye uhlome umbhede ophindwe kabili, ilineni yombhede, amatafula aseceleni kombhede, ikhabethe lezingubo kanye nezihlalo. Amakamelo okugeza angu-2 aqukethe ikhabethe lesibuko, isomisi sezinwele namathawula anele. Igumbi lokuhlala elinethezekile negumbi lokudlela elinekhishi elivulekile elixhumene, elilinganiselwa ku-36 m², likumema ukuthi upheke futhi uhlale ndawonye. Isofa lingahlanganiswa ukuze kwakhe umbhede ongu-1.70 x 1.90 m. I-TV, umshini wokuwasha izitsha, i-microwave, umenzi wekhofi, iketela, izinto zokupheka ezanele ne-china ziyatholakala kanye ne-WiFi.
Ifulethi litholakala emaphethelweni lapho kubukwa indawo yasemaphandleni. Izindlela ezinhle eziyindilinga zokuqwala izintaba ezizungeze i-Limburg ziqala lapha, zikumema ukuthi uhlale edolobheni lethu elidala elikhangayo. Indlela yomjikelezo we-Lahntal nayo ingemuva ngqo kwendlu futhi imizila emihle yezithuthuthu phakathi kwe-Taunus ne-Westerwald ayikude. Abagibeli bezikebhe bangathatha isitimela baye e-Weilburg bese behla e-Lahn baye e-Limburg - ngokwesiqubulo esithi "imvelo ehlanzekile". Abatshuzi nabo bathola inani lemali yabo, ichibi lenkwali e-Diez (i-Aquanaut diving base) liqhele ngemizuzu embalwa nje ngemoto. Izitolo ziyatholakala edolobheni.
Umninikhaya uhlala endlini.